Guddoomiye Yariisoow oo dhagax dhigay xarunta Degmada Wadajir oo muddo burbur-saneyd – Puntland Post
Guddoomiye Yariisoow oo dhagax dhigay xarunta Degmada Wadajir oo muddo burbur-saneyd
Muqdisho (PP) ─ Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna Duqa Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta dhagax-dhigay xarunta degmada Wadajir oo ku burburtay qaraxii ka dhacay bishii Juun ee sanadkii hore. Waxana munaasabaddda dhagax-dhigga ka soo qeyb galay Xildhibaano ka tirsan labada aqal, maamulka degmada, siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada.
Xildhibaan C/qaadir Carabow iyo Sen Samsam Daahir Maxamuud ayaa uga mahadceliyey shacabka degmada Wadajir in ay u istaageen dhismaha xarunta degmadooda, taas oo kaalin mugleh ka qaadan doonta isku xirka dawladda iyo shacabka. Iyagoo balan-qaaday in maamulka ay kala shaqeyn doonaan wax walba oo horseedi kara horumarka degmada.
Ugu dambeyn, Eng. Yariisow ayaa ka codsaday bulshada degmada Wadajir in lala shaqeeyo maamulka degmada iyo kan gobolka Benaadir islamarkaasna loo midoobo sidii looga hortagi lahaa cidkasta oo cadow ku ah nabadda Caasimadda.